Madaxweyne Obama ayaa u digay Suuriya - BBC Somali - Warar
Madaxweyne Obama ayaa u digay Suuriya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 December, 2012, 03:08 GMT 06:08 SGA
Adduunku isha ayuu ku hayaa, ayuu yiri madaxweyne Obama. Isticmaalka hubka kiimikada ah waxay tahay noqon doontaana mid aan gebi ahaanba la qabali karin. Haddii ay xukuumadda Suuriya samayso wax uu ku tilmaamay khalad masiibo ah oo ay adeegsato hubka kiimikada ah, cawaaqib ayaa ka dhalan doona.
Wax yar ayaa laga sheegayaa ifafaalooyinka ugu dambeeyay ee ka soo baxaya Suuriya, sarkaal aan la magacaabin oo Maraykan ah waxaa uu wargeyska New York Times u sheegay wax uu ugu yeeray suurta galnimo diyaargarin hubka kiimikada ah.
Aqalka Cad, afhayeenka madaxweynaha, Jay Carney, waxaa uu sheegay inuu jiro walaac isasootaraya oo ah inay dhici karto in xukuumadda Assad ay qaadato tallaabo naf la caarinimo ah oo ay isticmaasho hubkeeda kiimikada.
Afhayeenku ma uusan sheegin waxa Maraykanku ka yeeli doono haddii ay sidaasi dhacdo, isagoo yiri oo keliya waa muhiim in wax kasta loo diyaargar loo ahaado.
Xafiiska gaashaandhigga Maraykanka, Pentagon, afhayeen Mark Toner, waxaa uu qeexay meesha Maraykanku aanu oggolayn in la gaaro oo ah isticmaalka ama faafinta hubka kiimikada ah.
Magaalada Dimishiq, wasaaradda arrimaha dibadda ee Suuriya waxay sheegtay in xataa haddii ay haysan lahayd hubka kiimikada ah aanay sinnaba weligeed ugu adeegsateen shacabkeeda.